Zimbabwe police beat anti-government protesters in capital - The Zimbabwean
HARARE, Zimbabwe — Zimbabwe’s police used tear gas, arrests and beatings Friday to quell anti-government protests in the capital, Harare.
A woman lies injured on the tarmac after been injured during protests in Harare.AP
Seven people were injured, including one in critical condition and 80 people were arrested, said Nelson Chamisa, leader of the Movement for Democratic Change opposition party that organized the demonstrations.
Riot police arrest and forcibly apprehend protestors during protests in Harare, Zimbabwe.AP
Zimbabwean riot police block a road ahead of the planned protest.AP
Zimbabwe’s economic turmoil with inflation at 175 percent, widespread power cuts lasting up to 19 hours a day and shortages of water are blamed for the rising political tensions.
A riot police man kicks out at a man.AP
Protesters run from teargas.AP
The Zimbabwe government should allow peaceful protests, said Rupert Colville, the spokesman for the UN High Commissioner for Human Rights.
“With opposition demonstrations still likely to take place in Zimbabwe in the near future, we urge the government to find ways to continuously engage with the population about their legitimate grievances on the economic situation and to stop cracking down on peaceful protesters,” said Colville, in a statement Friday.